कोरोना भाइरसले विश्वमा कम्तिमा दुई सय ७० खरब आर्थिक घाटा - NA MediaNA Mediaकोरोना भाइरसले विश्वमा कम्तिमा दुई सय ७० खरब आर्थिक घाटा - NA Media
कोरोना भाइरसले विश्वमा कम्तिमा दुई सय ७० खरब आर्थिक घाटा
कोरोनाभाइरसको संक्रमण अलि धिमा जस्तो देखिएपनि यो झन विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई अवरोधमा पुर्याउन सक्छ । चीनको वुहान प्रान्तको गहिराइमा शुरू भएको महामारी द्रुत गतिमा फैलँदैछ । दक्षिण कोरियाबाट इटाली र इरानहुँदै अहिले अन्य देशमा उल्लेखनीय प्रकोपहरू पारेको छ । आर्थिक नतिजामा अमेरिका, यूरो-क्षेत्र र जापानमा बढि मन्दी ल्याउने संभावना छ । चीनमा यहि कोरोना भाइरसको कारण सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धिको रेकर्ड भएको छ । विश्वलाई घाटा पर्ने २७० खरब डलर जुन अमेरिकाको सम्पूर्ण कूल गार्हस्त उत्पादन बारबर हुन सक्छ ।
चीनमा के हुँदैछ ? चाख लाग्दो छ । जहाँ मोटर वाहन बिक्री ८० प्रतिशतले खस्केको छ । यात्रुहरुले सवारि गर्दा यातायातमा हुने फाईदा सामान्य स्तरबाट ८५ प्रतिशत तल छ । र व्यवसयिक सर्वेक्षणले आर्थिक अवस्था एकदमै न्युन देखाएका छन् ।
ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सको अनुमान अनुसार २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा कूल गार्हस्त उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर वार्षिक एक दशमलव दुई प्रतिशत घट्न गएको छ । यो रेकर्डमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो ।
जेभएपनि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो प्रहार यो भाईरसले चीनमै गरेको हो । चीनसित तुलना गर्दा स्थिर वा सुतेको अवस्थामा पुगे जस्तो हो । अर्थात् केहि समयलाई निदाएपनि ब्युँझिएर फेरि पुरानै अवस्थामा काम गर्न, पुग्न सकिने । विश्वको बाँकी भागको लागि चीनले मागको स्रोत, आपूर्तिको स्रोत र वित्तीय बजारका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो ।
२०१२ मा चीनको आयात २०१ खरब डलर थियो । कफी सपको संजालको सेवा दिने लेटेसदेखि यमको क्रिस्पी फ्राइड चिकनसम्म, चीनमा बिक्री हुने वस्तुहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि चीन प्रमुख बितरक हो जसबाट विश्वका त्यस्ता रेस्टुरेन्ट कफी सपका लागि मुख्य कमाईकर्ता हो । चिनियाँ पर्यटकहरू घरमै बसिदिँदा दक्षिण एशियाको समुद्री तटका रिसोर्टदेखि पेरिसको बुटिकमा समेत ठूलो घाटा परिरहेको छ ।
चीनका उपकरणहरु विश्वका बिभिन्न वस्तु उत्पादन गरेर बिक्रि गर्ने सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो चीन । जब चिनियाँ कारखानाहरू बन्द भए एप्पलको आईफोन र निर्माण मेशीनरी सबै कुरा भेट्टाउन विश्व बजारमा गाह्रो हुनथाल्यो ।
कोरोनाको प्रभाव सानो व्यवसायमापनि पुग्छ । हङकङमा एउटा गहना डिजाइनरले थाह पाए कि उनका स्वचालित, डिजिटलाइज्ड चिनियाँ आपूर्तिकर्ताहरू निस्क्रिय भए । चीनबाट गहना बनाउने सामान आपूर्ति हुन्जेल तिनीहरू एक दिनमा एक हजार औंठी निकाल्न सक्थे । जब चीनले त्यस्ता वस्तु आपूर्ति गर्न छाड्यो तब उनका कामदारहरूले एउटा गहना बनाउनै एक हप्ता त हथौड़ामा बिताए । हङकङका गहना ब्यापारीले गुनासो गरे कि उनीहरु गहना बनाउने काम परापूर्व कालमाझैं फर्किनुपर्यो ।
यदि चीनले चाँडै यसको प्रकोप नियन्त्रणमा लिन सके विश्वभरिका कारखाना दोस्रो त्रैमासिकमा फेरि फर्कने संभावना छ । त्यस त्यसरि फर्किन अन्य देशको अवस्थालेपनि भर पार्ने छ । चीनले सोचेझैं फर्किएमा त्यसले बाँकी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सुधार्न सक्छ ।
चिनियाँ आपूर्तिकर्ता र विश्वव्यापी खरीदकर्ताहरू जोड्ने मुख्य प्लेटफर्ममध्ये एक चीन हो । मेड इन चाईन कटको एक सर्वेक्षणले फेब्रुअरीको अन्तसम्ममा उत्पादन कम्पनीहरूले काम शुरू गरिसकेका छन । अप्रिलको अन्तसम्ममा, चीनको उत्पादन क्षमता फर्किने आशा गरिएपनि हुन सकेको छैन ।
मार्चको अन्त्यसम्म महामारी ठूलो मात्रामा चीनमा सीमित थियो । अर्थतन्त्र निकै कमजोर थियो । तर उनीहरूको आफ्नै सेरोफेरोभित्र मात्रै देखिएको प्रकोपले गर्दा यो एक सामान्य हो भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो ।
चीनको वुहान राज्यका छ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण रुपमा लकडाउनमा राख्न सक्नुपनि चानचुने थिएन । यसलेपनि अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्यो चीनलाई ।
चीनका धेरै कम्पनीको उत्पादन शुरु भएपनि तिनमा निकै कम मात्रामा वस्तुको माग बढेको छ । विश्वका अन्य देशको अवस्था सुध्रिएन भने के हुन्छ ? सधैं अंग्रेजी अक्षर भि (V) जसरि तल ओर्लिएर सिधै माथि जाने खालको आर्थिक लाभ भन्दा अंग्रेजी अक्षर यु (U) जसरि बिस्तारै तल झर्ने र बिचमा बिस्तारै बढेर बल्ल आथि उक्लिन सक्छ । अझैपनि चिनमा कलकारखानको उत्पादन द्रुत छैन । माग बढेपनि तिब्रता छैन ।
चिनमा आशा गरिएको तिन दशमलव १ प्रतिशतको ब्रिद्दिदर भाइरसको कारणले दुई दशमलव ३ प्रतिशतका दरले घटाएको छ । यो भाईरसले दक्षिण कोरिया, इटाली, जापान, फ्रान्स, जर्मनी अमेरिका, भारत, बेलायत, क्यानडा र ब्राजिल संसारको १० वटा ठूला अर्थतन्त्रहरूले सुस्त अवस्था भोग्नुरेको छ । किनभने उनीहरू भाइरसबिरुद्दको घरेलु लडाईमै संघर्ष गरिरहेका छन् ।
यस परिदृश्यमा, २०२० को लागि विश्वव्यापी वृद्धि एक दशमलव दुई प्रतिशतमा झर्छ । युरोपेली क्षेत्र र जापान मन्दीमा जान्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वृद्धि शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा झर्छ । यसले उच्च बेरोजगारि बढाउने छ ।
विश्वव्यापी महामारीको आर्थिक प्रभावलाई कम गरेर आर्थिक ब्रिद्दी पहिलेकै रुपमा कब्जा गर्न सम्पन्न मुलुकहरु सक्षम देखिएनन् । ति देशहरुले तिनका विकास, संव्रिद्दी, संरचना र आर्थिक ब्रिद्दीका मोडलमा असफलता भोगिरहेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने आगामी वर्षको व्रिद्दी शुन्यमा जान सक्छ । अमेरिकाले यूरोपेली क्षेत्र र जापानलाई संकुचनमा सामेल गराउने छ । त्यसो हुँदा सम्भवतः राष्ट्रपति चुनावको गतिशील परिवर्तनको संभावनापनि छ ।
चीनको अर्थतन्त्र ३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र विस्तार हुने छ । यो रेकर्डमा सब भन्दा सुस्त हो सन् १९८० पछिको । अर्थात् देङस्याओपिङले सुधार गरिरहेको बेलाकै जस्तो हुनसक्छ । यसबाट २७० खरब घाटा हुनसक्छ । चीनमा पहिलो चौथाईको जीडीपी वृद्धिको पूर्वानुमान पाँच दशमलव आठ प्रतिशतबाट झरेर शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा पुग्न सक्छ । यसले चीनको आर्थिक ब्रिद्दिदरको अनिस्चिततालाई प्रमाणित गर्ने छ ।
तर यथार्थता के हो भने चीनको आर्थिक ब्रिद्दिदर र आर्थिक घटा जति धेरै भएपनि विश्वका लगभग एक सय देशले यस्तै मार खेप्न सक्छन् । किनभने ति हरेक देशको आर्थिक ब्रिद्दिदर, उत्पादन, क्षमता आदि चीनको जस्तै छैन र हुनसक्दैन । कम्तिमा तिनले चीनको कोरोना भाईरसबाट भोगेको कष्टको आधा भोग्ने छन् ।
एउटा कुरा के स्पष्ठ छ भने कोरोना भाइरस प्रकोपले कसरी आपूर्ति संजालहरु अवरुद्ध भइरहेको छ, भविष्यमा कति अबरुद्द पार्ने छ भन्ने बारे अहिलेसम्म अनिश्चितताहरू छन् । त्यसले विश्वको आगामी अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने छ । त्यहि संजालहरुको निस्चिततालेपनि अर्थतन्त्रका अहिलेका अनुमानहरु बदलिन सक्छन् ।
Gallery image with caption: छ अर्ब बराबरको साधारण शेयर बिक्री हुँदै
Gallery image with caption: साउदी अरबमा १६ दिन सम्म बैंकहरु बन्द रहने, एटिएम मेसिन तथा अनलाईन सुबिधामा कुनै असर नपर्ने
Gallery image with caption: सुनको मूल्य निरन्तर ओरालोः आज फेरि १५ सयले घट्यो, यस्तो छ कारोबार
Gallery image with caption: पेट्रोलियम पदार्थमा बिकास कर प्रतिलिटर ५ रुपैंयाले बढ्योे
Gallery image with caption: आँधिखोला कृषि तथा पशुपालन फर्मको टोली द्वारा कृषि मन्त्री भुषाल सँग भेट